ỌT REQUIRETGE achọrọ ka ị sonye n'akụkụ ahụ dị egwu: afọ 18
AKWỤKWỌ: ihe dị na nkebi a "Ihe ọjọọ a ga-eme agaghị egbu" edebere maka ndị na-ege ntị, jide n'aka na ị nwere ma ọ dịkarịa ala 18 afọ tupu ịnweta ya.
IHE: naanị gị bụ maka onwe gị ma ọ bụrụ na ị kpebie ịnweta ya na "Ihe ọjọọ a ga-eme agaghị egbu" ... Ya mere emela mkpesa, tinye paswọọdụ « Afrike » iji kwado na ị bụ agadi na nghọta!
[content_protector paswọọdụ = ”AFRIKE”]
November 22, 2020 00: 50 dịghị comments
Dịka ọmụmaatụ, na Congo Brazzaville, Eze Makoko bụ onye gosipụtara ike kachasị ike na-eyikarị uwe na-acha uhie uhie. Emela iro nke onwe anyị ...	GỤKWUO
November 22, 2020 00: 45 dịghị comments
Ndị ọzọ ma ọ bụ ndị gbara gị gburugburu chọrọ nghọta na ọmịiko gị. Iji mee nke a, ịkwesịrị itinye oge zuru ezu na ...	GỤKWUO
November 22, 2020 00: 40 dịghị comments
Mgbe anyị chere ihe mgbochi ma ọ bụ nsogbu ihu, ka anyị were echiche anyị ọsọ ọsọ. Echiche efu bụ ihe niile. Nke a bụ nhụchalụ nke fu ...	GỤKWUO
November 21, 2020 03: 03 dịghị comments
Akụkọ ihe mere eme, nke ndị ọzọ na-ede maka anyị na-enweghị anyị, na-emegide anyị. Ọ bụ akụkọ nzuzu; A facade akụkọ; A hi ...	GỤKWUO
N'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ n'ụzọ na-ezighi ezi: ọ bụ Afrika a, ihe Mandela mere? Ajuju nke njedebe akụkọ ịhụnanya, n’etiti Nelson Mandela na Winnie Mandela ọ hụrụ n’anya, kwesịrị mkpa ya niile “Ihe N. Mandela mere gbasara ndị nketa ya, ọ bụ eziokwu ka ọ bụ na ọ bụghị? "
November 19, 2020 12: 11 dịghị comments
Nọrọ ruo afọ 38 n'akụkụ akara ngosi nke ọgụ megide ịkpa oke agbụrụ, isii n'ime ha mgbe a tọhapụsịrị ya n'ụlọ mkpọrọ nke ike ịkpa oke agbụrụ ebe ọ nọrọ ...	GỤKWUO
Nelson Mandela, ọ nwere ekele maka Mobutu? Nelson Mandela dị ka ọ bụ naanị mgbochi maka Mobutu, ebe ọchịchị nke ikpeazụ nọ n'ọnụ mmiri
November 19, 2020 10: 11 dịghị comments
Dị ka a ga - asị na ọdachi abịaghị naanị ya, ọchịchị Mobutu amaghịzi ụzọ ọ ga - esi tụgharịa ozugbo nnupụisi AFDL gafere ...	GỤKWUO
Albert Einstein, prọfesọ nke physics na Mahadum Hibru nke Jerusalem, na-aga United States na nke mbụ ya na-enye ụmụ akwụkwọ ojii na Mahadum Pennsylvania usoro ọmụmụ physics, Mee 3, 1946 "Einstein bụ nnukwu onye sayensị nke anaghị ekpe ikpe. ọ bụghị mmadụ dị ka agba nke akpụkpọ ha ”
November 19, 2020 00: 00 dịghị comments
Albert Einstein, juru ya anya na ọgwụgwọ emere ndị ojii / ndị Africa, ebe ndị ọcha na ndị isi ojii nọ iche n’ebe niile ọha ....	GỤKWUO
Ezigbo ndị isi ojii / ndị Africa, anyị kwesiri inyefe Africa n'aka Chineke nke Israel? Africa na-ata ahụhụ site na West na East, mana ọ kachasị karịa na West
November 17, 2020 11: 11 dịghị comments
Ọdịda anyanwụ a, nke udo, aghụghọ ma ọ bụ obi ọjọọ, wetaara anyị nkwenye gabigara ókè na Chineke nke Israel site na ịmaatụ ha ...	GỤKWUO
Covid-19: nhọpụta nke Joe Biden, na-atụ anya ịmalite ịgba ọgwụ mgbochi; elsgbọ ala na ụlọ ọrụ ọgwụ na-agbasi mbọ ike ịmalite ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi megide Covid-19 ... (VIDEO)
November 16, 2020 12: 12 dịghị comments
Worldwa ga-akwadebe na Jenụwarị 2021 maka ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi megide nje Corona a. Ndị na-eme ihe ndị a ga -...	GỤKWUO
Covid-19: "Dr Stella Immanuella na Bill Gate"; anyị na-ebi n’ime ụwa ara ara, ụwa gbadara agbada, ụwa dara ogbi; emegiderịta dị n'etiti "Dọkịta Stella na Bill Gate", banyere Corona Nje Virus gosipụtara ntụgharị nke ụkpụrụ n'ụwa taa, ka ụwa nke ugbua kwuru ebe mmadụ kwesiri ịbụ onye nwere ezi uche
November 16, 2020 10: 10 dịghị comments
Dr. Stella Immanuella: Dibịa amaara akwụkwọ; Ndi dibia nke ndi nduzi nke ndi dibia akwukwo; Ọ na-anọdụ na Board of Directors na ...	GỤKWUO
Nọvemba 26 10: 37